Anitech MW411 Wireless Optical Mouse (Gray) ~ ICT.com.mm
HomeAnitech MW411 Wireless Optical Mouse (Gray)
Anitech MW411 Wireless Optical Mouse (Gray)
Anitech မှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Anitech MW411 Wireless Optical Mouse (မီးခိုးရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မှုအတွက် 2.4 GHz ကြိမ်နှုန်းကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ nano receiver ကို အသုံးပြုပြီး ကွန်ပြူတာနဲ့ အကွာအဝေး (၁၀) မီတာအထိ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ Click အကြိမ်ရေ (၃) သန်း အထိ ရိုက်နှိပ်ခံနိုင်တဲ့ Mouse Key... [Learn more]
Anitech မှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Anitech MW411 Wireless Optical Mouse (မီးခိုးရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မှုအတွက် 2.4 GHz ကြိမ်နှုန်းကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ nano receiver ကို အသုံးပြုပြီး ကွန်ပြူတာနဲ့ အကွာအဝေး (၁၀) မီတာအထိ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ Click အကြိမ်ရေ (၃) သန်း အထိ ရိုက်နှိပ်ခံနိုင်တဲ့ Mouse Key တွေကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ AA အရွယ်အစား ဓာတ်ခဲတစ်လုံး (Alkaline အမျိုးအစား) ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Wireless Technology: 2.4 GHz, Wireless distance: 10 m, Mouse weight: 51+-5g (excluding battery and receiver) , Key route: 0.8 mm , Key force: 70+- 5g, Key life: 3000,000 times, Rated voltage/current: DC3V -13 mA , Power supply mode: 1AA battery . Alkaline batteries
Mouse weight: 51+-5g (excluding battery and receiver)
Key route: 0.8 mm
Key force: 70+- 5g
Key life: 3000,000 times
Rated voltage/current: DC3V -13 mA
Power supply mode: 1AA battery . Alkaline batteries